Shixnadda Markab Qaadista Sare ee Shiinaha Oo Soo Bandhigeysa Airbag Loogu Talo Qaado Iyo Soo Degitaan warshad iyo shirkado cusub Haohang
Markab Qaadista Awood Qaadasho Sare oo Bilaabaya Airbag Qaadista iyo Soo Degista
Boorsooyinka 4-lakab oo dhererkoodu yahay 1.5m dia x 15m Haamaha-hawadu waxay si ammaan ah u xajisan karaan 156-tan oo leh cadaadis shaqo oo ammaan ah oo ah 0.08MPa inta la rogayo.
iska caabbinta xoqida
3 ~ 18 Mitir
iska caabbinta daxalka
10000 Cadad / Cadad Maalintii
Xirmooyinka Seaworthy ee weelka
Daahida Markabka Iyo Soo Degida Airbag Iyada oo cabbirka iyo astaanta loo habeeyay
7 lakab sawir goyn ah:
Model Faahfaahinta (D × L) Codsiga
3-lakab Ballaca (D): Doomaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ilaa ama hoos si ay u bilaabaan dariiqa iyo walxaha dhaqaaqa
0.8m, 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m iwm
4-lakab Dhererka (L): Markabka weyn illaa ama hoos si loo bilaabo dariiqa iyo walxaha dhaqaaqa
5-lakab oo u dhexeeya 5m ilaa 18m Markab weyn oo dhexdhexaad ama dhexdhexaad ah ilaa ama hoos si loo bilaabo habka iyo u dhaqaaqista walxaha
6-lakab ama ka badan (Dhexroor iyo dherer ayaa u habeyn kara shuruudaha macaamiisha) Markab weyn oo kor ama hoos u ah sidii loo bilaabi lahaa iyo taageerida qaybaha muhiimka ah inta lagu jiro hawlgalka
Dulqaadka Cabirka iyo Muuqaalka:
Dhererka iyo dhexroorka barkinta shilka ee markabku waa in lagu cabbiraa cadaadiska shaqada lagu qiimeeyay, dulqaadka la oggol yahay waa ± 3%. Muuqaalka kore ee maraakiibta bilaabaya shibinta shilku waa inuu ahaadaa mid siman, dhalaalaya oo aan dillaacin, xumbo, lakabyo kala geddisan, god ama dhibic.
Shirkadeena cusub ee soo saaraysa bacaha hawada ee isku dhafan waxay qaadataa qaacido gaar ah oo caag ah. Iyo caag kasta iyo lakab dhar ah oo isku dhafan. Madaxa biibiile soosaarka ayaa isticmaala laba lakab oo ka badan jirka barkinta shilka. Tani waxay hagaajineysaa cadaadiska shaqada ee barkinta shilka waxayna xoojineysaa xoogga barkinta hawada. Shandadaha-hawadeenu waxay leeyihiin cidhiidhi wanaagsan, badbaado, iyo wareegga nolosha oo dheer. Nolosha isticmaalka ayaa laba jeer ka dheer bacaha hawada ee suuqyadayada qaababkeena caagga ah ee gaarka ah.
Tijaabooyinka loogu talagalay Markabka Bilaabista Markabka:
Bilaabidda Markabka iyo wareejinta
Farsamo cusub oo markabka Tuubo gudaheeda ah oo bilaabaya Airbag ku fiicantahay haynta iyo ku fiicnaanta Qaadista iyo waliba Dock iyo Doonta Ilaalinta.
1. "Waxaan hayaa maraakiib laakiin ma garanayo sida loo doorto cabbirka Marine Airbag."
Jawaab: Ha walwalin .Waxaanu leenahay in ka badan 10 sano oo khibrad ah. Fadlan ii sheeg macluumaadka markabkaaga, waxaan kuu soo jeedin karnaa cabir kugu habboon adiga.
2. "Waxaan rabaa inaan tijaabiyo taada Airbag Bada, laakiin waligay ma isticmaalo oo ma aqaano sida loo isticmaalo, ma i caawin kartaa? "
Jawaab: Ha welwelin Waxaan u soo diri doonnaa buuga waxbarista oo ay la socdaan Airbag Bada.
3. "Waa maxay MOQ-gaagu?"
Jawaab: MOQ waa 1PC.
4. "Sidee ku saabsan noloshaada Airbag Bada? "
Jawaab: Cimrigeenna loo qoondeeyay Airbag Bada waa 6 ilaa 10 sano
5. "Waa maxay muddada dammaanaddaadu?"
Jawaab: Waqtigayaga dammaanadda waa 2 sano. annaga ayaa mas'uul ka noqon doonna dayactirka ama kuu beddeli doona kuwa cusub haddii adiga ay noqotay dhibaatadeena tayada.
6. "Shahaadad noocee ah ayaad bixin kartaa?"
Jawaab: CCS, BV iwm shahaadada waa la heli karaa.
Hore: Wixii 2020 xumbo Xayawaan EVA Cusub oo midabkiisu buuxiyo
Xiga: Rasaas Fender-ka Caag ah oo loogu talagalay Soo Degida Maraakiibta Terminalka
Bacda Hawada Badda
Barkinta Hawada Badda
Bacda Hawada Rubber
Boorsada Hawada ee Markabka
Dambiisha Hawada Biyaha
Markab Qaadista Awood Qaab Sare oo Daahfureysa Airbag ...
Marine Pneumatic Rubber Fender Yokohama Nooca Fl ...
Nooc Adag oo Adag Nooca Nooca V Nooca W Nooca M ...
Maqaarka Polyurea EVA xumbo Buuxin Donut Fender
Soo saar furka tuubo cadaadis sare leh ...
Cadaadis sarreeya oo ah fiilooyin kaadi haysta oo buufin kara
Maraakiibta Tec, Shiinaha Rubber Fender, Barkinta Hawada Badda, Block isku dhafan, Fender Rubber, Boorsada Hawada ee Markabka,